Factory bracket - Mpanamboatra bracket China, mpamatsy
Sobaka indroa / a
Sobaka Bowl tokana / a
Loza tokana misy tontonana 7540
Zava-bolo tokana HM7646
Bowls roa vita tanana vita tanana HM8448
Vilia roa tsy misy amin'ny tontonana ...
Bowl roa tsy misy tontonana ...
Bracket vy matevina: JW-01
Famaritana ny vokatra: ny fanaovana sakafo maraina maro loko, sakafo atoandro voaomana tsara na sakafo hariva fitiavana irery, mipetraka eo akaikin'ny fianakavianao sy ny namanao ary mifampiresaka amin'izy ireo, ny fiainana dia nohosoratan'ny seho toy izany, izay mahatonga ny olona mankafy azy io. Ao amin'ny sehatry ny lakozia mafana toy izany, ny filentehana azo ampiharina sy marefo dia tsy maintsy ilaina. Izy io dia mamorona atmosfera marefo, izay tena mahafinaritra. Ny fananana fantsom-bidy avo lenta dia fahatsapana mahafinaritra ny fontsika, endrika voadio sy kanto amin'ny ...
Ny bracket vy matevina: JW-02
Famaritana ny vokatra: ny fanaovana sakafo maraina maro loko, sakafo atoandro voaomana tsara na sakafo hariva fitiavana irery, mipetraka eo akaikin'ny fianakavianao sy ny namanao ary mifampiresaka amin'izy ireo, ny fiainana dia nohosoratan'ny seho toy izany, izay mahatonga ny olona mankafy azy io. Ao amin'ny sehatry ny lakozia mafana toy izany, ny filentehana azo ampiharina sy marefo dia tsy maintsy ilaina. Mamorona rivo-piainana mahafinaritra an-dakozia, izay mahafinaritra indrindra.Ny fantsom-bolo avo lenta dia fahatsapana mahafinaritra ao am-pontsika, endrika manatsara sy kanto ...
Fametahana vy tsy misy fangarony: JW-03
Famaritana ny vokatra: ny fanaovana sakafo maraina maro loko, sakafo atoandro voaomana tsara na sakafo hariva fitiavana irery, mipetraka eo akaikin'ny fianakavianao sy ny namanao ary mifampiresaka amin'izy ireo, ny fiainana dia nohosoratan'ny seho toy izany, izay mahatonga ny olona mankafy azy io. Ao amin'ny sehatry ny lakozia mafana toy izany, ny filentehana azo ampiharina sy marefo dia tsy maintsy ilaina. Izy io dia mamorona atmosfera marefo marefo, izay tena mahafinaritra. Ny fananana milentika avo lenta dia fahatsapana mahafinaritra ao am-pontsika, fihetsika voadio sy kanto ...
Ny bracket vy matevina: JW-04
Ny lakozia ao an-dakozia dia ampahany lehibe amin'ny tranonao amin'ny fiainana andavanandro. Ny fantsakanana malalaka indrindra dia vita amin'ny akora vy (SS201 na SS304) ho fanoherana ny harafesina maharitra. ● Fampidirana feo noho ny tsy fihoaram-pefy ● Famolavolana vilia be dia be ho an'ny fahazoanao mora. Fampiasana vokatra ● Ho an'ny fanasana lakozia sy kaontenera. ● Fanasana sy fanomanana sakafo. Torohevitra momba ny vokatra ● Aza esory ny zavatra simika mahasosotra. ● Aza cle ...
Fametahana vy tsy misy fangarony: JW-05
Fonosana vy tsy misy vy: JW-06
Fametahana vy tsy misy fangarony: JW-07
Fametahana vy tsy misy fangarony: JW-08